Fahaiza-manao | Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd.
Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd. dia mpamorona voatanisa mitsivalana misy andriamby Neodymium tsy fahita amin'ny tany sy ireo fivoriambe andriamby mifandraika amin'izany. Azonay atao ny manatsotra ny fizotran'ny tetikasanao ary manampy anao amin'ny famoronana vokatra vaovao manomboka amin'ny hevitra ka hatramin'ny fandefasana.
Fanamboarana andriamby Neodymium
Ny fanamboarana andriamby Neodymium no vato fehizoron'ny paikady Horizon Magnetics hiantohana ny famatsiana andriamby avo lenta avoakan'ny andriamby avo indrindra amin'ny fotoana manokana, ohatra, ny fiakaran'ny vidim-piainana ary ny famatsiana fohy ny fitaovana tsy fahita eto an-tany. Fahaiza-manao famokarana antonony, andriamby Neodymium 500 taonina dia fehezina hentitra nefa tsy manitatra fahaiza-manao fa manatsara ny fitantanana mba hahafeno ny fepetra takian'ireo mpanjifanay.
Volavola sy injeniera
Tianay ny fanamby ary liana amin'ny vahaolana maoderina namboarina izahay mba hahatanteraka ny fiasan'ny mpanjifa. Ny fahalalantsika ara-teknika amin'ny andriamby sy ny traikefa ampy amin'ny rafitra magnet Neodymium tsy fahita firy eto an-tany dia ahafahantsika manome ny mpanjifa ny tolo-kevitra mahomby na serivisy famolavolana manomboka amin'ny sehatra hevitra ka hatramin'ny fahatanterahan'ny vokatra farany. Ankoatr'izay, misy serivisy fampidirana injeniera miverina manampy ny mpanjifa hanatsara ny endrika efa misy.
Fanamboarana lamba sy milina ao an-trano
Ny kojakoja fanodinam-pahefana manara-penitra ataontsika dia manome fotoana sy kalitaon'ny machining block andriamby ary ampahany metaly nofehezina. Mety hihaona amin'ny takiana manokana an'ny mpanjifa toy ny habetsaky ny fandeferana, ny fandefasana maika, ny fizotran-javatra sarotra, sns. Indrindra ho an'ny vokatra vaovao, ny fahafaha-miasa ao an-trano dia mety hamokatra ny prototype amin'ny fotoana hanafainganana ny fizotran'ny fampandrosoana sy hifehezana ny tsiambaratelo famoronana vokatra tsiambaratelo vaovao.
Amin'ny maha-mpamatsy andriamby tsy manam-paharoa atokisana antsika, Horizon Magnetics dia miezaka mafy hahazoana ny haavon'ny kalitao avo indrindra hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanatsarana hatrany. Fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy dia ahafahana manara-maso haingana sy haingana ny fiovan'ny herin'ny andriamby sy ny fihenan'ny zoro mba hiantohana ny filan'ny kalitao avo lenta mifanaraka amin'ny fepetra takiana kalitao miaraka amin'ny kilema aotra ho an'ny fampiharana henjana toy ny fiara mandeha. Ny andriamby sy fivoriambentsika tsy fahita firy dia ny fanarahan-dalàna RoHS sy REACH.
Famatsiana tokana ho an'ny vokatra manety lehibe
Ny karazana sy ny haben'ny fiangonan'ny andramena Neodymium manara-penitra toy ny andriamby fanjonoana, manidy andriamby, andriamby vilany, andriamby fametahana ary andriamby misy any amin'ny birao dia azo alaina ho an'ny fandefasana haingana. Ny famokarana andriamby Neodymium sy ny famoronana ao an-trano dia afaka manamboatra rafi-pandrefesana an-tany tsy fahita firy amin'ny fangatahana. Ny fahaizana momba ny andriamby dia mamela antsika hanana loharanom-pitaovana maharitra maharitra hafa miaraka amina habe kely fa ilaina kosa ny mitambatra ao anaty fandefasana iray.